နားခိုရာ: Undo လုပ်မရတော့ရင် ...
Undo လုပ်မရတော့ရင် ...
မနေ့ညနေက ၅နာရီခွဲလောက် ရုံးကပြန်ဖြစ်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဗဟန်းသုံးလမ်းမှာဆင်းပြီး ကိုယ့်တို့ ၂လမ်းထဲ ချိုးကွေ့ ၀င်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ လမ်းထိပ်နားက အိမ်တစ်အိမ်မှာ အသုဘ ကြော်ငြာသင်ပုံးလေး တစ်ခုကို တွေ့လိုက်တယ်။ မောင်ဘယ်သူ.... အသက်(၂၉) ဆိုတာကို တစ်ချက် လှမ်းတွေ့လိုက်တယ်။ လမ်းဆက်လျှောက်လာရင်း ... အော် ငယ်သေးတာပဲလို့ စိတ်ထဲတွေးမိတယ်။ လေးငါးအိမ်ကျော်တော့ နောက်ထပ် သင်ပုံးလေး တစ်ခုတွေ့ပြန်ရော။ ကွယ်လွန်သူက လူငယ်အမျိုးသားပဲ အသက်က ၂၅နှစ်တဲ့။ စိတ်ထဲတော့ ... ဘဲနှယ် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လမ်းထဲမှာ လူငယ်လေးတစ်နှစ်ယောက် တစ်ချိန်တဲ့ သေသွား ကြပါလားပေါ့။ ကိုယ်နေတဲ့ တိုက်နားရောက်တော့ နောက်ထပ်နာရေးတစ်ခု ထပ်တွေ့ပြန်ရော။ ဒါလဲ လူငယ်လေးပဲ။ တိုက်ဆိုင်မှုရှိတာသေချာသွားပြီ။ ကွယ်လွန်တဲ့ရက် နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့ နှစ်ယောက်မှာ တူနေတယ်ဆိုတာ စိတ်က သတိပြုမိလိုက်တယ်။
ညပိုင်း dinner appointment တစ်ခုရှိသေးတာနဲ့ အိမ်ပေါ်တက်၊ ရေမိုးချိုးပြီး အ၀တ်လဲ၊ သားလေးကို ခဏထိန်းပေးပြီး အိမ်ကပြန်ထွက်ခဲ့တယ်။ ချိန်းထားတာက အင်းယားလမ်းထိပ်က Friendship ဆိုတော့ ရေတာရှည်လမ်းဖက်ကထွက်မယ်ဆိုပြီး ဗဟန်းသုံးလမ်းဖက်ကို ချိုးကွေ့လိုက်တော့ နောက်ထပ် နာရေးတစ်ခု။ အသက် ၁၇နှစ်လူငယ်လေးပဲ။ ဘုရားရေ လေးယောက်တောင် တစ်ရက်ထဲသေသွားကြတယ်? တိုက်ဆိုင်တာတော့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ Taxi မငှားတော့ပဲ။ ဆိုက်ကားလေး ငှားစီးသွားရင်း ဆိုက်ကားဆရာကို အကျိုးအကြောင်းမေးကြည့်မိတယ်။
Car Accident ဖြစ်ပြီးဆုံးတာတဲ့။ နိုင်ငံခြားကပြန်လာတဲ့တစ်ယောက်က သူ့သူငယ်ချင်းငါးယောက်ကို ပြုစုရင်းစားကြသောက်ကြ မူးကြရမ်းကြ... အသေးစိတ်တော့မမေးမိတော့ဘူး။ အပြန်မှာ တာမွေနဲ့ ရွှေဂုံတိုင်သွားတဲ့လမ်းမှာ ငါးထပ်ကြီးဘုရားအကျာ် ဗံဒါပင်မှတ်တိုင်နားမှာ ဓါတ်တိုင်ကို ၀င်တိုက်သတဲ့ ဘယ်လောက်တောင် အရှိန်ပြင်းအောင်မောင်းလာတယ်မသိ ဓါတ်တိုင်လဲကျိုးကျ..... အဲဒီထဲက တစ်ယောက်က အဲဒီနေရာတင် ပွဲချင်းပြီး သေသတဲ့။ ကျန်တဲ့သုံးယောက်က ဆေးရုံရောက်မှ သေတာ။ သေတာက လေးယောက် ။ ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ယောက်ကလဲ တစ်ယောက်က ဦးနှောက်အာရုံကြောဌာနမှာ အတွင်းလူနာ၊ ကျန်တစ်ယောက်က အရိုးအကြောမှာ အတွင်းလူနာ .....
ဖြစ်ရလေ။ သောက်စားပျော်ပါးကြသည်အထိ ဘာမှမဖြစ်သေး။ ကားကို အန္တရယ်ဖြစ်လောက်အောင် ဘယ်လောက်တောင် မြန်မြန်မောင်းလိုက်တယ်မသိ။ အဲဒီလိုလေးမောင်းလိုက်ရတာကလဲ ဘယ်လောက် စိတ်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ခဲ့သလဲမသိ။ အအေးတိုက်ကို လိုက်မေးကြည့်ရမလို ဖြစ်နေပြီ။ တစ်ခါတစ်လေ လူ့ဘ၀မှာ ဘာမဟုတ်လာလေးနဲ့ undo လုပ်လို့မရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ၀မ်းနည်းဖွယ် ကြုံတဲ့အခါ ... အများကြီး အများကြီးကို ဆုံးရှုံးကြရတာပဲ။
(စာကြွင်း။ ဆိုက်ကားသမားပြောပြတုန်းက ဖြစ်တဲ့နေရာက မှားနေတယ်။ တကယ်ဖြစ်သွားတာက ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းအတိုင်း ရွှေဂုံတိုင်ဂုံးဆင်းက ပထမ မီးပွိုင့်အကျော်လေးမှာ။ S'pore သံရုံးနားပေါ့။ အဲဒီသတင်းက Voice ဂျာနယ်မှာလဲပါလာတယ်။ အသုဘက အမျိုးသားနေကချတာ။ ဘာပြောကောင်းမလဲ လေးယောက် တစ်ရက်ထဲဆိုတော့ တစ်လမ်းလုံး စည်ကားနေတာပေါ့။)
Posted by little moon at 2:10 PM
ညပိုင်း dinner appointment တစ်ခုတွေဘာတွေလုပ်မနေပါနဲ့ သောက်ဖို့ချိန်းထားတယ်ဆိုပြီးရောပေါ့။ :P
Undo လုပ်လို့ မရခဲ့တာတွေ အများကြီးပါပဲ။ လောလောဆယ် အထိတော့ Redo မဖြစ်ရအောင် ဆင်ခြင်နေပါတယ်။
မောင်းတဲ့သူ ကို စိတ်ဆိုးတာဘဲ။ သူမူးနေရင် မမောင်းသင့်ဘူး
အသောက်အစားက ဆင်ခြင်သင့်တယ် - မူးနေရင် ပိုဆင်ခြင်သင့်တယ်... သောက်စားတဲ့နေရာမှာ အပေါင်းအသင်းလည်း ဆင်ခြင်သင့်တယ်...
December - ခရီးသွားလ
Colorful themes in Gmail
ဘာလဲ ဘယ်လဲ Arsenal
European film festival in Yangon
Consumer Behavior နဲ့ Super coffeemix
Heroes season3showing on Star World
Maradona as Argentina manager ???